Kuyini komphakathi? komphakathi we izigaba ngazinye
udaba olubalulekile ithonya elibusa ukuthuthukiswa futhi kusungulwa kwekwetfulwa lezinceku womuntu, yofuzo, noma imvelo uhlala ungomunye wongqondongqondo ezibaluleke kakhulu futhi okuthakazelisayo ososayensi - izazi zokusebenza kwengqondo, zezenhlalo kanye izifundo zamasiko - iminyaka eminingi. Naphezu intuthuko zofuzo sokuqonda isimiso sezakhi zofuzo, akunakwenzeka ukuchaza isimo somuntu ngezici ezithile ubuntu noma izici zokuziphatha kuphela kuthonywa nezici zofuzo, kanye isimo senhlalo. Cishe noma yikuphi ukuziphatha kanye khona izici ezithile Ubuntu bomuntu kungenxa ufuzo, futhi ithonya imvelo. Ngakho-ke, impikiswano akukho mayelana odlala enkulu, futhi abanye indima ingane ezilolonga ubuntu - ufuzo noma imvelo futhi kanjani they ngesikhathi esifanayo nihlanganyele. Ikhodi zethu zofuzo - lokhu ingenye okuqala yentuthuko, kuhlanganise nemikhuba ehambisana ngokomzimba futhi zokuziphatha ngofuzo okhokho babo, ezungezile imvelo namasiko - kungenye ukuqala inqubo yethu yokuthuthukisa, okuyinto uhlanganyela nathi kukho konke ukuphila futhi ubizwa ngokuthi komphakathi.
Komphakathi - ukuthuthukiswa ezihlukahlukene izindima social, kanye nokwenziwa zokuziphatha futhi amasiko kanye nezinkambiso, okuwumsebenzi oqala ngo ingane isencane futhi uyaqhubeka sesikhulile. Impumelelo ye komphakathi kuxhomeke ezicini ezintathu eziyinhloko:
Ukuqonda lokho okulindele imvelo ngokuhambisana nemithetho yomphakathi.
Ukushintsha kwendlela ephendula lokhu okulindelekile.
Conformism, okusho izifiso kanye nezifiso ukulandela izindinganiso zomphakathi kanye nemithetho.
Isikhathi eside nesenzakalo inqubo yokufunda ukuphila nesimo esithile nokuzwisisa izindima ezihlukahlukene nabantu ezigabeni. Izigaba komphakathi, noma izinkathi, ihlukaniswe zamabanga aphansi naphezulu. Primary iqala ebuntwaneni, lapho ngokuyisisekelo kwakhiwa ubuntu. Lena nezikhathi kubaluleke kakhulu futhi okuphawulekayo yendima yayo ebalulekile lapho udlala indawo esondelene kakhulu (abazali, nezinye izihlobo nabangane), yiyona ukuhlonywa nokuthuthukisa ubudlelwane obufanele. Isikhathi eyinhloko komphakathi - inkathi okuqonda kanye nokuthuthukiswa ekuchumana, bathuthukisa Iqiniso lokuthi umuntu eba yilungu eligcwele umphakathi.
Izigaba kamuva komphakathi zabantu kubizwa ngokuthi yesibili. Basonta ingxenye yokuphila kwakhe kwesibili, lapho ebhekene ezihlukahlukene nezikhungo zomphakathi - isimo, ibutho, imfundo kanye nethimba ukukhiqizwa, okuyinto ithonya phezu ukubunjwa nokuthuthukiswa kwezinhlangano muntu Kuyaphawuleka kakhulu futhi ebonakalayo njengoba eneminyaka engu okucabanga. izigaba yesibili komphakathi - izigaba evumela ngabanye kakade ayeba sicondze izindima entsha yokuqonda umphakathi, ukufaka endaweni angayazi, kodwa ezindaweni ezibalulekile zomhlaba umgomo.
Kuphi umngcele phakathi zamabanga aphansi naphezulu komphakathi nezikhathi? Njengomthetho, kucatshangwa ukuthi izigaba komphakathi esikhundleni nomunye ekufezeni, sesithola uzibuse zezombusazwe ezomnotho nezenhlalo, okungukuthi, iphasipoti, profession futhi umsebenzi, umkhaya, njll
Inqubo komphakathi - inqubo ayahambelana futhi emuva. Kuyeza nokufunda ohlelweni lokuxhumana komphakathi, ngamunye kuba owawubalulekile isipiliyoni, ngakolunye uhlangothi, e inqubo nokwenziwa komsebenzi we isimo senhlalo akabe bayahlala wamukela nakho, futhi oguqula bayifaka zengqondo yabo, amagugu kanye orientation.
Komphakathi ngizodabula at iqhaza kothile nezingahlobene nendaba kanye nosizo. Abantu nezikhungo ngawo umuntu ubhekene ukufezwa ukuxhumana kwabantu, ngokuthi amanxusa e komphakathi. Njengengubo nje izinyathelo komphakathi ejenti zihlukaniswe oyinhloko (eduze imvelo abalulekile) nokwesibili (nezikhungo zomphakathi kanye nezinhlangano, kanye nokuphathwa yabo, abameleli, njll).
Komphakathi - akuyona nje inqubo yokukhula, lena ukuzuzwa esingaguquguquki ubuntu akwaziwa, kodwa abalulekile ngoba izinkambiso zakhe nemisebenzi, Ngokuqhubeka kukho konke ukuphila. komphakathi izigaba uqondane umjikelezo wokuphila eyisisekelo, umuntu uphawu izenzakalo ezinkulu yomlando wakhe.
Ubuchwepheshe Ukhetho Thola Neutrinos nesiqondiso akhethiwe
The best ibhulakufesi - irayisi iphalishi nge omisiwe
"Inspiron" (amaphilisi): yokusetshenziswa. Amaphilisi kanye Syrup "Inspiron": incazelo
Buso ebusweni sitrobheli
Amachibi nemifula laseStavropol Territory
Lapho kudingekile, imithi ukuyeka lactation
Indlela Yokuthola borscht nge inyama ngesi-Ukraine
Imininingwane eqondile ubuyise
Indlela Yokuthola "Gingerbread amadoda". Gingerbread "amadoda": ifomu
Cooper sika umsipha - kuyini? Afakwe ezimvilophini nemisipha Cooper sika
Indlela yokwenza pancake ku Shrove ngoLwesibili?
Indlela yokwenza vase aphume iphepha. Indlela yokwenza vase aphume iphepha lukathayela